Faransiiska oo Itobiya u dhisaya ciidanka Badda. | ogaden24
Faransiiska oo Itobiya u dhisaya ciidanka Badda.
Dawladaha Itobiya iyo Faransiiska ayaa Qalinka ku duugay Heshiiska dhismaha ciidamada Badda Itobiya oo dawlada Faransiisku Tababarka iyo Qalabayntooda ay Tunka u Ridatay.
Madaxwayne Emanuel Macrone-ka Faransiiska iyo Ra’iisal wasare Abiy ayaa Galabnimadii Talaadada isla sheegay in Heshiiska iskaashi ee Labada dal dhex-maraya uu Qayb kayahay dhismaha ciidamada Badda Itobiya oo dawlada France maalgalinayso.
Wajiga Hore ee dhismaha ciidamada Badda Itobiya ayaa lagu bilaabayaa 3000 oo Askari waxaa se mustaqbalka Lagaadhsiinayaa 30,Kun oo Askari sida uu Horay u sheegay Taliye kuxigeenka ciidamada milateriga Itobiya.
Heshiiska dhismaha ciidamada Badda Itobiya ee Faransisku Tababarkooda iyo Qalabayntooda ba Tunka u ritay, ayaa durba Walaac Hor leh ku abuurtay bulshada Somaaliyeed oo is waydiinaya Halka ciidamadaasi salka dhigi doonaan iyo Badda ay kahawl-gali doonaan maadaama Itobiya aysan Badd lahayn.